Maxaa caqabad ku ah wax ka qabashada fatahaadaha Soomaaliya? | Najah Media Network
Bogga Hore Wararka Manta Maxaa caqabad ku ah wax ka qabashada fatahaadaha Soomaaliya?
Maxaa caqabad ku ah wax ka qabashada fatahaadaha Soomaaliya?
Hay’adaha gargaarka iyo bani’aadanimada ee Qaramada Midoobay ayaa Arbacadii sheegay in dhaqaale yari haysato wax caqabadka qabashada fatahaadaha ka socda Soomaaliya.
Xafiiska Qaramada Midoobay ee Isuduwaha Arrimaha Bani’aadamnimada (OCHA) ayaa sheegay in guddiga la-talinta ee Sanduuqa Aadminimada Soomaaliya (SHF) ay ansixiyeen qoondeyn lacageed oo dhan 9 milyan oo doollarka Mareykanka ah si wax looga qabto deegaanada fatahaaduhu saameeyeen Koofurta Soomaaliya.
Sida laga soo xigtay Hay’adda Cunnada iyo Beeraha ee Qaramada Midoobay (FAO), in ka badan 650,000 oo Soomaali ah ayaa ka cararay guryahooda tan iyo bishii Janaayo sababo la xiriira daadad iyo fatahaado ka dhacay guud ahaan Soomaaliya.
Qiimeyn deg deg ah oo la sameeyay bishii Ogosto ayaa waxa ay muujineysaa in bulshooyinka ku nool Hirshabeelle iyo Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed ay ka mid yihiin kuwa ugu daran daadadka wabiyada.
Waxa ay sheegtay in qaar badan oo ka mid ah dadka cusub ee soo barakacay guryahooda ay hadda ku nool yihiin guryo cariiri ah, oo ka sameysan dhar duug ah, baco, kartooo iyo Alwaax.
Hay’adaha Gargaarka bani’aadamnimada ee Qaramada Midoobay ayaa sheegay in sanduuqa bani’aadamnimada ee Soomaaliya uu sidoo kale sii wadayo taageerida codsiyada dib-u-dejinta ee la xiriira COVID-19.
Hawlahaas waxaa ka mid ah tababarro iyo kulamo wacyigelin ah oo la xiriira COVID-19 iyo wacyi-gelinno, iibinta qalabka PPE ee shaqaalaha, dhismaha musqulo degdeg ah iyo rakibidda tubooyinka biyaha, nadaafada si loo hubiyo helitaanka biyo nadiif ah xeryo ay ku noolaa karaan barakacyaashu.
Intaa waxaa dheer, OCHA waxa ay sheegtay in kasta oo deeq-bixiyeyaasha lacaga bixiyaan, haddana baahida bani’aadamnimada ee Soomaaliya ayaa wali ah mid walaac badan iyadoo xustay in markay ahayd 1-dii Sebtember, ilaa 567 milyan oo doollarka Mareykanka ah loo helay ka-hor-tagga howlaha ku saabsan Qorshaha Ka-jawaab celinta Bina-aadamnimada.
Maqaal horeKhasaaraha ka dhashay qaraxii shalay ka dhacay Muqdisho oo sii kordhay
Maqaal XigaAbaanduulaha cusub ee AMISOM oo booqasho ku tegey talisyada ciidamada Amisom